Aluminium ileli, Aluminium Truck Box, Aluminium Pallet - YSXF
SINIKEZA IMIKHIQIZO EPHAKEME YEKHwalithi
Ibhokisi lethu lolimi lweMaxxHaul Box lenzelwe ukukhweza kumakharavila ngozimele we-A-Tongue ukuhlinzeka ngesitoreji esithe xaxa samathuluzi akho, amagiya amatende, amaketanga okuphepha, amabhande, izembozo zemoto, imishini yangaphandle, izintambo, izesekeli ze-hitch, izintambo, amasondo okhiye nokunye okuningi . Ungalokothi ukhohlwe ithuluzi noma igiya lapho ulidinga! - Yenziwe ngento eqinile ye-aluminium ehlala isikhathi eside futhi emelana nokugqwala ngokwakhiwa kwe-seam okushiselwe ngokuphelele kanye ne-rigid powder coat finish - Iphethini lepuleti leDiamond linikeza ukuqina okungeziwe ...
I-LIGHTWEIGHT YOKUKHULA OKULULA NOKUTHWALA - Leli bhokisi lamathuluzi lenzelwe ngokwakhiwa okuqinile kepha okulula ukukhweza ngaphambili kwezitayela ze-A-Frame. Kulula ukuhlangana, kuhle ukuthwala ususe kwenye indawo uye kwenye uma kunesidingo. Isixazululo esihle sokugcina amathuluzi akho noma izinto egalaji lakho futhi ungeza isikhala esithe xaxa sokugcina ku-trailer yakho ebiyelwe. ✅ IDIYIMU EQHUBEKAYO YOKWENZA IDAYIMANE - Yakhiwe nge-aluminium emangelengele enezingwengwezi ezifakwe ngokuphelele, ukuze isetshenziswe kabi. Ibhokisi lamathuluzi okugcina lizokhiqiza ...
Isingeniso Somkhiqizo I-China iyisithekelisi esikhulu kunazo zonke emhlabeni semikhiqizo yasemanzini.Kuyindawo lapho imikhiqizo yasemanzini icutshungulwa futhi iqandiswe khona. Imakethe enkulu yamanje, iningi lezinto ezibandayo ezisetshenzisiwe ziyipulasitiki, insimbi engagqwali, ibhodi lashukumisa njalonjalo.Zinokuqhutshwa kokushisa okushisayo, ukusetshenziswa kwamandla okuphezulu, ukulimaza okulula, nenqubo yokusebenza eyinkimbinkimbi. Umkhiqizo wenziwe ngekhwalithi ephezulu ye-aluminium sheet. Ine izinzuzo zokuphila isikhathi eside, ukudlulisa okuhle ukushisa kanye ne-quic ...
I-Aluminium alloy guardrail isetshenziselwa ukuvikela ohlangothini lwamaloli, ama-trailer, nezimoto zobunjiniyela, ezidlala indima yokuvikela, ukukhuphuka nobuhle; i-aluminium alloy guardrail inesisindo esincane, ukuzinza okuhle, ukumelana ne-oxidation ephezulu, ukumelana nokugqwala, ubuhle, nokuthwala umthwalo Futhi ukuqina nakho kungahlangabezana nezidingo ezijwayelekile; ijamo nosayizi kungabuye egcizelele ngokuvumelana nezidingo zamakhasimende. Imikhiqizo Show
Isingeniso Somkhiqizo Ipulatifomu yokusebenza ephezulu kakhulu eklanyelwe futhi yathuthukiswa yinkampani yethu.Iyacubungula ubuchwepheshe yenziwa ngokuthuthukisa imikhiqizo yasekhaya.Yenziwe nge-aluminium profile welding nesakhiwo sokulungisa imishudo. Inethuluzi elinesisindo ezansi, elizokwazisa ngokuzenzakalela lapho umthwalo weqa isisindo esiphephile, kuthuthukisa ukuphepha komkhiqizo. Incazelo Yomkhiqizo I-Cargo Carrier Lifting Aluminium Alloy Platform Umbala Wesiliva, Omnyama noma njengoba kuceliwe ...
Isingeniso Somkhiqizo Lo mkhiqizo ucwaningo lwenkampani yami ezimele nokuthuthukiswa kwethimba langaphakathi le-r & d lemikhiqizo esebenzayo, enye yokusetshenziswa okukhulu eqenjini le-xugong, namanye amabhizinisi, iwine ukuthandwa kakhulu emakethe. Usayizi nomumo kungalungiswa ngokuya imikhiqizo yezimoto, inciphisa ukufakwa kwezinkinga ezithile eziyinkimbinkimbi. Izici Zomkhiqizo 1. Ukusetshenziswa kwangaphakathi izinhlobonhlobo zezakhiwo eziqinisayo, uma kuqhathaniswa nokunye okubalulekile, gwema ngempumelelo inkinga yokukhubazeka ...
Isingeniso Somkhiqizo Ama-pallets asetshenziselwa kakhulu inzuzo endaweni yokugcina izinto kanye nokugcinwa kwezinto.Ukuvikelwa kwemvelo, ukuphepha kokudla nezinye izindaba sekuvele ngokugqamile. I-Aluminiumalloy pallet, esikhundleni sama-pallets enziwe ngokhuni, ama-pallet epulasitiki kanye nama-pallets ensimbi, Asetshenziswe kakhulu emazweni athuthukile afana ne-Europe neMelika. Incazelo Yomkhiqizo Umbala Wesiliva, Omnyama noma njengoba kuceliwe Isisindo 18-25kg / Usayizi owenziwe ngokwezifiso 1200 * 800 * 152/1200 * 1000 * 152/1219 * 1016 * 15 ...
I-Xuzhou Caixin Aluminium Products Co, Ltd. ingumkhiqizi wemikhiqizo ye-aluminium enezikhungo zokuhlola ezihlome kahle namandla wezobuchwepheshe aqinile.Kunezinhlobo ezahlukahlukene, ikhwalithi enhle, amanani afanelekile nemiklamo yesitayela, imikhiqizo yethu isetshenziswa kakhulu ekuphehleni amandla kagesi omoya imishini, imishini esindayo nezimoto, okokusebenza kwelanga nezinye izimboni. Imikhiqizo yethu yaziwa kabanzi futhi ithenjiwe ngabasebenzisi futhi ingahlangabezana nezidingo eziqhubekayo ezishintshayo kwezomnotho nezenhlalo.Siyakwamukela amakhasimende amasha namadala avela kuzo zonke izizinda zokuxhumana ukuze asithinte ukuze sibe nobudlelwano bebhizinisi besikhathi esizayo kanye nempumelelo efanayo!
Aluminium ngokunemba ekubunjweni kungenziwa ngemikhiqizo ye-aluminium. Yize izikali nomumo wehlukile, usayizi oqondile, ukubukeka okuhle nokusebenza okuzinzile kungazuzisa abantu nabantu, futhi kwakheke umbala ohlukile wokuphila. Ezimpilweni zethu, kuhlale kunenkampani ye-alum ...
Aluminium ingxubevange ibhokisi lamathuluzi ngomunye wemikhiqizo yemikhiqizo yebhokisi le-aluminium. Luhlobo lwebhokisi olwakhiwe ngezinto ezibonakalayo ze-aluminium ukufeza ukusetshenziswa kokubeka amathuluzi namathuluzi wokulinganisa. Ngokuhlukile kwamanye amabhokisi amathuluzi, leli bhokisi lamathuluzi line-aluminium alloy. I-cha ...
Izici nokusetshenziswa kwamaphrofayili we-aluminium yezimboni
Izici 1. Kunezincazelo nobukhulu obuhlukahlukene, nosayizi wohlangothi olude nohlangothi olufushane ukuphindaphindeka. Isibonelo, i-4040 yethu ejwayelekile, i-4080, i-40120, i-4040 iyisikwele, zonke izinhlangothi ezine zingama-40mm, kanti i-4080 uhlangothi olude olungu-80mm. Uhlangothi olufushane ngu-40mm, kanti lo ...